चीन 2.२ मीटर कालेन्द्र रोलर हीट प्रेस मेशिन कारखाना र आपूर्तिकर्ता एशियाप्रिन्ट
मेशिनको योजनाबद्ध रेखाचित्र
१. र्याक ड्राइभ: चेसिस भित्र फ्यूम घटाउनुहोस्, लामो सेवा समय।
२. स्वचालित ट्रिमिंग: कम्बल चाललाई मुद्रण प्रभावलाई असर गर्नबाट रोक्न यो स्वचालित रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ।
Sep. विभाजित उपकरण: स्वचालित महसुस स्टपले आपतकालिन स्थितिमा तुरुन्तै स्वचालित महसुसलाई अलग गर्न सक्दछ, कम्बललाई बढी सुरक्षा दिनुहोस् र यसको प्रयोग जीवन बढाउन सक्दछ।
Press. दबाव उपकरण ： दबाव समायोज्य र स्थानान्तरण को दबाव ठीक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
Man. मैन्युअल अलग उपकरण: पावर कटौतीको मामिलामा, सुरक्षा र मैन्युअलको सुविधाजनक डिजाइन कम्बलको सेवा जीवनलाई बचाउन फिर्ती उपकरण फिर्ताको महसुस गर्दछ।
Air. एयर शाफ्ट: प्रयोग गरिएको उच्च बनाइएका कागजहरू स collecting्कलनको लागि, यसले समय र प्रयास बचत गर्न सक्दछ
टच स्क्रिन प्यानल: तापक्रम र समयको सटीक नियन्त्रण। यो मानवीकरण डिजाइन र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
"U" आकार उपकरण: नरम कपडाको लागि सहज भोजन, यसले प्रिन्टि more बढी समान र श्रम बचत राख्न सक्दछ।
निकास प्रणाली: हस्तान्तरण प्रिन्टि with प्रक्रियामा उत्पादित धुँवा र ग्याससँग डिल गर्नुहोस्, अधिक कुशलतापूर्वक काम गर्नुहोस्।
कपडा रिवाइन्ड उपकरण: ट्रान्सफर प्रिन्टिंग पछि समाप्त कपडा स .्कलनको लागि।
"V" शेल्फि Unit युनिट: शेलि unit युनिटमा प्रयोग गरिएको उच्च बनानेवाली कागजका लागि रोलर यसलाई टाढा लैजान्छ। यसले अधिक भारी काम बचत गर्न सक्छ र कामदारलाई सजिलो गर्न दिन्छ।
अलार्म लाइट: जब कम्बल सफलतापूर्वक प्रवेश गर्दछ, यो एक रिमाइन्डरको रूपमा आवाज बनाउँदछ।
उच्च उत्पादन क्षमता र छोटो वितरण समय। रोलर तातो प्रेस मेशिनको डेलिभरी समयसँग तुलना गर्नुहोस्, साथीलाई २० दिन भन्दा बढी आवश्यक पर्दछ, र हामी यसलाई १ 15 दिनमा पूरा गर्न सक्दछौं।
अघिल्लो: बौद्धिक नियन्त्रण जर्सी क्यालेन्डर रोल हीट प्रेस मेशिन
अर्को: रोलर क्यालेन्डर हीट प्रेस मेशिन रोल
डिजिटल थ्रीडी कपड़ा छाला फोर स्टेशन एम्बोसिन ...